Akụkọ - Nhọrọ ngwaọrụ ngwaọrụ CNC
Adalata Fit Holder
Nhọrọ ngwaọrụ ihe CNC
Ka ọ dị ugbu a, akụrụngwa akụrụngwa ndị CNC na-ejikarị gụnyere ngwaọrụ diamond, ngwaọrụ cubic boron nitride, ngwaọrụ seramiiki, ngwaọrụ ndị a na-ekpuchi, ngwa carbide na ngwa igwe dị ọsọ. E depụtara ndepụta ọrụ arụmọrụ nke ihe eji arụ ọrụ dị iche iche n'okpuru. A ga-ahọta ihe akụrụngwa maka ihe ntanye NC dị ka ihe eji arụ ọrụ na ọdịdị nke ọrụ ahụ. Nhọrọ nke ihe eji egbutu ihe eji eme ihe kwesiri inwe ezi uche na ihe nhazi nke ihe eji eme ihe, ihe ndi ozo. egwuregwu ihe nhazi, tumadi na-ezo aka na akụrụngwa akụrụngwa, anụ ahụ Njirimara na chemical Njirimara nke abụọ egwuregwu, iji nweta ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ngwá ọrụ ndụ na ndị kasị ibu ọnwụ arụpụtaghị ihe.
1.Matching nke ihe eji egbutu ihe eji eme ihe na ihe ndi ozo nke ihe ndi ozo bu ihe ndi ozo nke ihe ndi ozo na ihe ndi ozo nke ihe ndi mmadu na-achota ihe ndi ozo dika ike, ike na ike nke ihe eji eme ihe. dị iche iche n'ibu Njirimara ndị kwesịrị ekwesị maka dị iche iche workpiece ihe. (1) ekweghị ekwe usoro nke ngwá ọrụ ihe bụ: diamond ngwá ọrụ> cubic boron nitride ngwá ọrụ> seramiiki ngwá ọrụ> carbide> elu na-agba steel.The ekwe usoro nke ngwá ọrụ ihe bụ:> elu na-agba ígwè carbide> seramiiki ngwá ọrụ> diamond na cubic boron nitride ngwá ọrụ. (3) iji nke ike nke ngwá ọrụ ihe onwunwe bụ: elu na-agba ígwè> carbide> cubic boron nitride, diamond na seramiiki ngwaọrụ. workpiece ihe onwunwe na elu ekweghị ekwe ga-esichara site na iji ngwa nwere ike dị elu. Ike nke akụrụngwa akụrụngwa ga-adị elu karịa ike nke ihe a na-arụ ọrụ, nke achọrọ ka ọ dị elu karịa 60HRC.Ọ bụrụ na ihe akụrụngwa sie ike, ọ ga - aka mma na - eyi ya ọgụ. abawanye, ya ike na ike na-abawanye na ekweghị ekwe mbelata, na ọ bụ adabara maka ike ike machining.When na cobalt ọdịnaya mbelata, ya ekweghị ekwe na-eyi na-eguzogide na-abawanye, na ọ bụ adabara finishing.Tools na magburu onwe elu okpomọkụ n'ibu Njirimara ndị kwesịrị ekwesị karịsịa maka arụmọrụ dị elu nke arụmọrụ nke seramiiki na-enyere ha aka igbutu na oke ọsọ, nke bụ 2 ~ 10 ugboro ngwa ngwa karịa carbide.
Ihe akụrụngwa ndị na-egbu ihe na ihe anụ ahụ nke ihe nhazi ahụ jikọtara ngwaọrụ ndị nwere ụdị anụ ahụ dị iche iche, dị ka, nrụpụta ọkụ dị elu na isi agbaze nke ngwa igwe ọsọ ọsọ, ebe agbaze dị elu na mgbasawanye ngwa ngwa nke ngwa seramiiki, Igwe ọkụ dị elu na mgbasawanye nke okpomọkụ nke ngwaọrụ diamond, wdg, kwesịrị ekwesị maka ịhazi ihe arụ ọrụ ahụ dị iche .Mgbe ị na-arụ ọrụ arụ ọrụ na arụmọrụ na-adịghị mma, a ga-eji ihe eji arụ ọrụ nke ọma iji mee ka ọkụ ọkụ gbasaa ngwa ngwa. ma belata ọnwụ nke okpomọkụ. N'ihi nnukwu nrụpụta ọkụ na ịgbasa ọkụ, diamond dị mfe ịhapụ ọkụ ọkụ ma agaghị ewepụta nrụrụ ọkụ dị ukwuu, nke kachasị mkpa maka nkenke igwe eji arụ ọrụ nwere oke ziri ezi chọrọ. okpomọkụ nke ihe eji eme ihe di iche iche: ngwa diamond 700 ~ 8000C, ngwa PCBN 13000 ~ 15000C, c seramiiki ngwá 1100 ~ 12000C, TiC (N) isi sikwuo carbide 900 ~ 11000C, WC isi àjà ihe ọ -ụ -ụ ezi ọka sikwuo carbide 800 ~ 9000C, HSS 600 ~ 7000C. carbide> TiC (N) ciment carbide> HSS> si3n4 dabeere seramiiki> a1203-dabeere seramiiki. Iwu nke okpukpu mgbasawanye nke ngwa ngwa nke ngwa ọrụ dị iche iche bụ: HSS> WC ciment carbide> TiC (N)> A1203 base seramiiki> PCBN > Si3N4 base seramiiki> PCD.The iji nke thermal ujo eguzogide nke dị iche iche na ngwá ọrụ ihe bụ HSS> WC ike alloy> si3n4-base seramiiki> PCBN> PCD> TiC (N) ike alloy> a1203-base ceramik.
3. Nsogbu kwekọrọ nke ịcha ihe ngwa ngwa na ihe onwunwe kemịkal nke ihe nhazi na-ezo aka na ntinye nke ihe onwunwe kemịkalụ dịka njikọta kemịkal, mmeghachi omume kemịkal, mgbasa na mgbasa nke ngwa ngwa ngwa ngwa na ihe eji arụ ọrụ. Akụrụngwa nke ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị maka ịhazi ihe eji arụ ọrụ dị iche. (1) ụdị ụdị ihe nbelata ngwa ọrụ (na nchara) maka PCBN> seramiiki> carbide na-ekpo ọkụ> HSS. (2) ọnọdụ ikuku oxidation nke ihe ọkụkụ dị iche iche. bụ dị ka ndị a: seramiiki> PCBN> carbide diamond> HSS Mgbasa ike nke cutter ihe (maka nchara) bụ: diamond> si3n4-base seramiiki> PCBN> a1203-base seramiiki. Mgbasa ike (na titanium) bụ a1203- isi seramiiki> PCBN> SiC> Si3N4> ola diamond.
4.Generally na-ekwu okwu, PCBN, seramiiki ngwaọrụ, ntekwasa carbide na TiCN base carbide ngwaọrụ ndị kwesịrị ekwesị maka space akara nhazi nke ferrous.
adreesị No.60, Xiangjiang Road (South), Chuangye Street, Suzhou National Hi-Tech District 215129
igbe akwụkwọ ozi nicogao@speedleopard.cn